होस्टग्याटर – Nepali Tech Blog
All Posts in होस्टग्याटर
होस्टग्याटरको होस्टिङमा ६० प्रतिशत छुट (Flash Sale)
In: छुट तथा अफर|Last Updated: August 6, 2015
होस्टग्याटरको ६० प्रतिशत छुट पाउँन यहाँ क्लिक गर्नुहोस् होस्टिङ सेवाहरु सामान्यतया महगों नै हुने गर्छ तर बेला बेलामा आउँने छुटहरुले होस्टिङहरु निकै सस्तो पनि पाउँन सकिन्छ । आज त्यस्तै छुटको अवसर छ । होस्टग्याटरले आज तिन घण्टाको लागि छुट ल्याएको छ । यो नेपाली समय अनुसार रातको १ बजेदेखि ४ बजेसम्म रहनेछ । होस्टग्याटरको होस्टिङ… (0 comment)
होस्टग्याटरको ५० प्रतिशत डिस्काउन्ट – आजको लागि मात्र (अफर सकियो)
In: छुट तथा अफर|Last Updated: March 25, 2014
होस्टग्याटर वर्डप्रेस वेबहोस्टिङमा सबैभन्दा मन पराइएको कम्पनी मध्येको एक हो । गुणस्तरिय वेबहोस्टिङका लागि यसले विभिन्न समयमा धेरै अवार्डहरु पनि जितेको छ । मैले केहि ब्लगहरु होस्टग्याटरमा होस्ट गरेको छु । सस्तो मुल्यमा पाइने तर अचम्मै राम्रो सुविधा दिने वेबहोस्टिङ हो यो । यसले अनलिमिटेड होस्टिङ, अनलिमिटेड ब्यान्डविथ, जति पनि डोमेन थप्न मिल्ने, स्टान्डर्ड कन्ट्रोल… (0 comment)
वर्डप्रेस ब्लग वा वेबसाइट होस्ट गर्न कुन हो सस्तो र राम्रो होस्टिङ ?
In: ब्लगिङ|Last Updated: January 26, 2014
मेरो ५ बर्षे ब्लगिङ यात्रामा मैले होस्टिङका बारेमा जति ज्ञान लिएँ, आज यो ब्लगमा लेख्दैछु । यो यात्रामा मैले दर्जनौं वर्डप्रेस होस्टिङमा चलाएको छु । अधिकांश फ्रि होस्टिङ नै थिए । एउटा फ्रिहोस्टिङमा बल्ल बल्ल ब्लगमा कन्टेन्टहरु भरिन थाल्दै थियो, कारण नै नखुलाई मेरो ब्लग गायब भयो । हो, ब्लग त थियो तर सबै कन्टेन्टहरु… (1 comment)
किन किन्ने होस्टिङ ?
In: ब्लगिङ|Last Updated: January 25, 2014
तपाईलाई लाग्न सक्छ, किन किन्ने होस्टिङ ? जब कि सित्तैमा ब्लग चलाउँन पाइने साइटहरु धेरै छन् । हो, वर्डप्रेस, ब्लगस्पट जस्ता साइटहरुबाट सित्तैमा ब्लग चलाउँन सकिन्छ । गुगल नै गर्ने हो भने पनि डोमेनमा तिनको नाम नघुसाई (सित्तैमा ब्लग बनाउँन पाइने साइटहरुमा ब्लग बनाउँदा आफ्नो डोमेनको बिचमा तिनको नाम राख्नै पर्ने हुन्छ । जस्तै: example.wordpress.com… (0 comment)